Top 5 Eyona ndawo zintle yoololiwe eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Top 5 Eyona ndawo zintle yoololiwe eYurophu
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 01/04/2021)
Ukuhamba ngololiwe yeyona ndlela iqhelekileyo ye babehamba eYurophu. ngoko ke, ezinye zezona zikhululo zixakeke kakhulu emhlabeni ziseYurophu kwaye ngamanye amaxesha, emhlabeni.
Ngaphandle kokungxinwa ziiyure eziphezulu, phezulu 5 Izikhululo zoololiwe ezixakeke kakhulu eYurophu zenzelwe ukubonelela ngayo nantoni na onokuyifuna kuhambo lwakho.
Landela uhambo lwethu ukuya eYurophu kwaye ufumanise ukuba sesiphi esona sikhululo sihamba phambili eYurophu. Umalunga nokufumanisa apho unokumamela khona iVivaldi kunye nakwesiphi isikhululo sikaloliwe onokulinda ngasemlanjeni ukusuka kololiwe ukuya e-Itali.
1. Isitishi sikaloliwe saseGare Du Nord, Paris
IGare du Nord eParis (Igama leGare elithetha isiFrentshi sisiKhululo soLoliwe, INord ngesiFrentshi ikumantla) sesona sitimela sixakeke kakhulu eYurophu. Zisondele kwi 700,000 abakhweli abadlula kwisikhululo sikaloliwe mihla le. Isitishi sikaloliwe sikufuphi ne 10th ukulungelelaniswa kumantla eParis, uninzi lwabakhweli ngamaParis. kuphela 3% Abakhweli bakaloliwe ngabakhenkethi abafika bevela e-UK okanye Eurostar train.
Esona sikhululo sikaloliwe sixakekileyo eYurophu sakhiwe ngaphakathi 3 iminyaka, phakathi 1861 yaye 1864. Uyilo luyilelwe 9 Imifanekiso eqingqiweyo ehombisa isitishi sikaloliwe ngaphakathi kunye 23 Imifanekiso eqingqiweyo ihonjiswa kwindawo yesitishi. Imifanekiso eqingqiweyo imele iidolophu eziphambili zaseYurophu isitimela esixhuma eParis.
Isikhululo sikaloliwe esimangalisayo sandiswa kabini kwiminyaka edlulileyo kwaye kulindeleke ukuba sandiswe kwakhona ngenxa yenani elikhulayo labakhweli kunye neendlela zikaloliwe.
I-Paris-Nord sisikhululo sikaloliwe sokuhamba ukuya eNyakatho yeFrance kunye namazwe aphesheya, umzekelo, Jemani , London, no Amsterdam. Ngaloo ndlela, esi sikhululo sikaloliwe esixakekileyo siya kukubonelela zonke izinto eziyimfuneko zokuhamba iiholide eFrance. Kukho iivenkile, iziko lolwazi lwabakhenkethi, iivenkile zekofu, kunye nezitshixo zemithwalo ukuba ufuna ukuhlola iParis ngononophelo kwiyure ezimbalwa phambi kokuba uloliwe ahambe.
2. Isikhululo esiphakathi seHamburg, Jemani
Engaphezulu kwe 500,000 Abakhweli badlula eHamburg Hbf (I-Hbf yindlela emfutshane eya eHauptbahnhof eguqulela kwisikhululo saseCentral) isikhululo sikaloliwe eJamani. Ngaloo ndlela, sesona sikhululo sesitimela esisesona sixakekileyo eYurophu.
Isikhululo sikaloliwe sakhiwe ngaphakathi 4 Iminyaka kunye nabayili bezakhiwo uHeinrich Reinhardt noGeorg Subenguth bayileyile. Isikhululo sikaloliwe savulwa ngaphakathi 1906 kunye 1991 indawo yokuthenga yongezwa kwibhlorho esemantla, apho kukho iindawo zokutyela, Iidomos, kwikhemesti, kunye namaziko enkonzo.
Ukuba uceba ukwenza njalo zokuhamba train ukuya eJamani, ungawonwabela umculo weklasikhi. ke, ngelixa uyokuthenga izikhumbuzo zomzuzu wokugqibela, izinto ezibalulekileyo zokuhamba, kunye nokubamba ukuluma ukuze utye, wamkelekile ukumamela kwaye ukonwabele amaXesha amane eVivaldi.
3. Isikhululo sikaloliwe saseZurich HB, Swizalend
Esona sikhululo sikhulu eSwitzerland siseZurich. I-Zurich HB (I-HB ifana neHbf kwaye kuthetha ukuba i-Hauptbahnhof = kwiSitishi esiPhakathi) isikhululo sikaloliwe sesona sikhululo sikaloliwe esixakekileyo eYurophu. Isikhululo sikaloliwe saseSwitzerland esixakekileyo sidibanisa iSwitzerland kunye nezixeko kwilizwe liphela kunye namazwe angabamelwane. Nazi 13 amaqonga kunye 2,915 oololiwe basiwa eJamani, ElamaTaliyane, Fransi , kunye ne-Austria mihla le. ngoko ke, Isikhululo sikaloliwe sase-Zurich sesinye sezona zikhululo zezitimela ezixakekileyo emhlabeni.
Enye into eyenza esi sikhululo kaloliwe sixakeke kakhulu eYurophu kukuba kukho okunene hustling & Ubomi besixeko obuxakekileyo ngaphakathi kwesitishi. Njengokuba, kuxhomekeke kwixesha lakho lokuhamba, Unga nandipha iimarike zekrisimesi and street parades.
Isikhululo sikaloliwe saseZurich sikwiDolophu endala yaseZurich. the Umlambo weSihl Ugqitha kwisikhululo, oku kuthetha ukuba kukho umkhondo kaloliwe ongaphezulu nangaphantsi kwawo.
kwakhona, isikhululo sikaloliwe saseZurich sidibanisa iSwitzerland neFrance, Jemani , ElamaTaliyane, Umphakathi waseCzech, no Austria.
Ifana nezinye izikhululo zikaloliwe zamanye amazwe kuluhlu lwethu, kukho i iofisi yokutshintshiselana ngemali, iofisi yetikiti, ukugcinwa kwemithwalo, iziko lolwazi lwabakhenkethi, kunye ne-Intanethi ye-Wi-Fi kwisikhululo sikaloliwe saseZurich. ke, ukuba ulibele ukupakisha into yakho kwikhefu eSwitzerland, akukho nto ikhathazayo kuba kwisikhululo unokufumana yonke into.
4. Isikhululo sikaloliwe saseRoma eRoma, ElamaTaliyane
Isikhululo sikaloliwe saseRoma sibonisa amanqaku aphezulu 5 Izikhululo zoololiwe ezixakeke kakhulu kuludwe lwaseYurophu ngenxa yenani eligqithileyo labakhweli abasebenzayo. Ixhomekeke ku 150 Izigidi zabagibeli ziyafika kwaye zisuka kwisikhululo sikaloliwe esixakekileyo minyaka le.
Isikhululo sikaloliwe saseRoma sinxibelelana neRoma i-Termini kunye nezinye izixeko zase-Itali Trenitalia. Ukwengeza, isitishi sikaloliwe sidibanisa i-Italiya namazwe aselumelwaneni nge 29 amaqonga. Umzekelo, ukusuka eRoma Termini, ungahambela eGeneva eSwitzerland, IMunich eJamani, kunye neVienna eOstriya.
Isikhululo sikaloliwe saseRome sinayo yonke into enokuhanjwa ngumhambi kuqeqesho lokuhamba eYurophu okanye e-Itali. ngoko ke, kwiholo yokungena, uya kufumana iofisi yokutshintsha kwemali, zokudlela, iinkonzo zeteksi, yaye izixhobo zemithwalo. Yonke into icwangcisiwe kwaye yenzelwe ukwenza ukuhamba kwakho kuhambe ngokugqibeleleyo kangangoko kunokwenzeka.
5. Isikhululo sikaloliwe saseMunich Hauptbahnhof, Jemani
Namhlanje zikhona 32 amaqonga kwesinye sezona zikhululo zixakekileyo kwezololiwe eYurophu. Ukwengeza, kukho iinkonzo ze-InterCity ne-EuroCity zoqeqesho kwinkoliso yeJamani, no Italy, Fransi , Swizalend, no Austria. Ukusuka kwisikhululo sikaloliwe iMunchen Hauptbahnhof ungaya eBerlin, Frankfurt, IVienna eJamani okanye bahambe ngololiwe ukuya eVenice naseRoma e-Itali, Paris, no Zurich.
Around 127 Abakhweli abazizigidi batyelela isikhululo sikaloliwe saseMunich minyaka le. This outstanding number makes the station one of the busiest train stations in Europe.
Kuyafana nakwezinye izikhululo zikaloliwe ezichazwe apha ngasentla, isikhululo sikaloliwe saseMunich sibonelela ngezixhobo ezininzi kunye neenkonzo kubahambi. Njengokuba, ungafumana iivenkile zokutya, iivenkile zezipho, nditsho nabantwana & imyuziyam yolutsha kwisikhululo sikaloliwe.
Ngaphandle kwesitishi, uya kufumana i-U-Bahn engaphantsi komhlaba metro, iinkonzo zeteksi, kunye nemigca yetram eya kukuthatha naphi na eMunich.
Nokuba ufuna uloliwe wesiphaluka okanye owamazwe aphesheya ukuze uhambe eYurophu, iyalela itikiti lakho kaloliwe kunye Gcina A Isitimela. Siya kukuvuyela ukukunceda ufumane ezona ndlela zikhethwayo zexabiso elifanelekileyo ezikhoyo ngexabiso elifanelekileyo.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Top 5 Eyona ndawo zintle yoololiwe eYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbusiest-train-stations-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
BusiestTrainStations Isikhululo sikaloliwe mzantsiocity erentsali traintravelgermany
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe